Rescue Homebase - The Kerry Blue Terrier Foundation
I-PICKLES ikwi “ukhukhamba”: udinga ikhaya elisha! Funda kabanzi "
Molly, along with her BFF (best friend forever) Herman, has had her life turned upside down this year so far! Her long-time owner developed some mental health issues so both Molly and Herman ended up in a shelter in southern CA. The owner asked for …
UMALLY ulangazelela ikhaya elisha elizinzile! Funda kabanzi "
Herman, along with his BFF (best friend forever) Molly, has had a very rough year so far! His long-time owner developed some mental health issues so Herman and Molly ended up in a shelter in southern CA. The owner asked for them back when he …
Izwe likaHerman seliguqulwe libheke phansi! Funda kabanzi "
Chase - Chasing ithemba nge Chase
Owesilisa we-7 yo e-Georgia. (Akutholakali ukutholwa njengamanje) UCase, ongu-KNUMX yo wesilisa Kerry, manje unoGeorge noLwesibili uHanna bayahlolwa. Ubeshiywe emuva ngesikhathi umndeni wakhe omude impilo uthutha muva nje futhi wangakwazi ukuhamba naye. Ijaha…
Chase - Chasing ithemba nge Chase Funda kabanzi "
Ukuzijabulisa - Ithuba elivamile neliligugu!
Ukuzijabulisa - Ithuba elivamile neliligugu! Funda kabanzi "
Zonke izinja zokutakula ezitholakalayo zibaliwe lapha. Uma kungekho maprofayela enja abhalwe ngaphezulu, akukho okusindisa okutholakalayo.
Faka isicelo sokuba sohlwini lwethu lokulinda ukutholwa noma ujoyine umphakathi wethu we-Kerry uphinde uxhase isisekelo sethu sokungenzi inzuzo 🙂
Ngena ohlwini lokulinda lwe-KBTF ukusebenzisa i-Kerry namuhla! Sisebenzisa inqubo yesinyathelo se-3; I-1st iyasebenza, i-2nd xhumana nomxhumanisi wakho wokutakula ngokusesha imininingwane yethu, i-3rd isayine inkontileka yokwamukelwa, uma usuvunyiwe ukuthi ukuluhlu lokulinda ukutakula.
Qala Uhlelo Lokutholwa Kwabazali Faka isicelo sokuthatha i-Kerry Namuhla!
Thola Umxhumanisi Wokuhlenga Thola bese uthintana nomxhumanisi wakho wokutakula ngokususelwa endaweni yakho ye-geo.
Inkontileka Yokutholwa Qeda uhlu lwemibuzo? Sayina oxhumana naye wokutholwa
Bika uKerry Olahlekile Bika Ukulahleka Kerry Kumphakathi
Siza Ufuna Thumela usizo olufunwa kuwebhusayithi yethu kwezokuhamba, usizo njll.
Yiba Umxhumanisi! Yiba Umxhumanisi Wophuluko Namuhla!
Yibani Umndeni Okhulisayo! Yiba Umndeni Wokuhlenga Umndeni Namuhla!
Ungathola izinhlobo zokuphrinta nezeposi zazo zonke izinhlobo nezicelo esikhungweni sethu sedokhumenti.
Zonke Izindlela Zedijithali
Onke amafomu okuphrinta kanye naweposi
Thintana Nendlela Yokutakula
Imininingwane mayelana nezinqubo zokutholwa kokutholwa, izinqubo zethu nezeluleko zokwamukela i-Kerry ene-KBTF.
Unentshisekelo yokuthola i-Kerry Blue Terrier? Ngaphambi kokuthi kudlule isikhathi, udinga ukwazi ukuthi i-Kerry ayiyona ...
UJanet Joers Uma ucabanga ukuthi umdala ...
Onke amafomu enziwe amadijithi futhi anga ...
Imibuzo mayelana nenqubo Yokuhlenga? Umqondisi Wokuhlenga Abathintekayo ...
Sebenzisa leli fomu ukufaka ukwamukela ...
Imininingwane ephathelene nohlelo lwethu lokusindisa, ukuhola abaholi nokuningi ngezinqubo zethu zokutakula.
I-Tracey Fulmer Puppy mill yigama elichaza ukuphathwa kabi kwezinja. UMnyango Wezolimo wase-US kuphela ...
Kuyadabukisa ukubona noma yimuphi umdlwane - ake ...
Ukuhlenga kusheshe kube nzima kakhulu. Lapha...
Inhloso yokuqala yohlelo lwethu Lokuhlenga ...
Isisekelo sisebenzisa abaxhumanisi bezokusiza abavela lapho ...
Ukubeka Okujwayelekile: IzinquboIziNqubo kanye Nokungenzi ...
Izindaba zakamuva ze-KBTF Rescue
Kunzima ngokwanele ukubalekela ubuhlobo obuhlukumezayo ngokwakho. I ...
[Isici esifakiwe: UValerie nomntwana waseCalifornia.] Inothi lomhleli: The ...
Ngithole le imeyili ngivela kuBetty ngasekupheleni konyaka owedlule. U ...
The Kerry Blue Terrier Foundation uyaziqhenya ngamakhaya amasha atholakele, imindeni efezekile nokuphela okujabulisayo esikunikeza umphakathi waseKerry.
Isikhangiso sokubekwa kukaCharlie Sawubona, Igama lami nginguCharlie futhi ngineminyaka engu-3. Ngihlala nomngani wami u-Angus ophinde atholakale ekutholeni izingane. Umnikazi Wami (Umama) ushonile ekuqaleni kuka-Ephreli, futhi ubaba uyagula kakhulu ukuthi angasinakekela. Amanye amalungu omndeni
December 27, 2015	Awekho amazwana
Sawubona, Igama lami ngingu-Angus futhi ngineminyaka engu-4. Ngihlala nomngani wami uCharlie ophinde atholakale ekutholeni izingane. Umnikazi Wami (Umama) ushonile ekuqaleni kuka-Ephreli, futhi ubaba uyagula kakhulu ukuthi angasinakekela. Amanye amalungu omndeni asenawo
I-imeyili ye-SOS yeza kimi ngoMeyi 2nd evela kuTracey Fulmer ingibuza ukuthi ngingahamba yini ukuya eToledo, OH ngiyolanda uMaggie obonwe endaweni yokukhosela. Umyeni wami wayengaphandle kwezwe ngaleso sikhathi ngamthumela
December 22, 2015	Awekho amazwana